Beta 5 yewatchOS 5.1 uye tvOS 12.1 vagadziri | Ndinobva mac
Uye zvakare, iyo beta vhezheni yeIOS 12.1 yevagadziri yakatangwawo, saka isu chete tine beta vhezheni yeMacOS Mojave iyo inonyatsosvika mangwana. Mukutaura idzi shanduro nyowani watchOS 5.1 uye tvOS 12.1 beta ivo vanogadzirisa mabugs uye nekuvandudza system kugadzikana, chimwe chinhu chavave vachiita kubva kare vhezheni.
Ichokwadi ndechekuti iyi yechishanu beta vhezheni inosvika pasvondo mushure mekutanga kwe beta 4, saka Apple inomhanya uye tinogona kukurumidza kuve neshanduro dzekupedzisira dziripo. Parizvino izvo zvatiinazvo ndizvo shanduro dzekuvandudza asi munguva pfupi isu tichava neiyo vhezheni yeIOS uye tvOS yevashandisi vakanyoreswa muchirongwa cheveruzhinji beta.
Isu tiri pachena kuti idzi shanduro nyowani hadziwedzedze imwe yakawanda nhau kupfuura iya akaisirwa pakutanga, neboka FaceTime mafoni kana anopfuura makumi manomwe emoji nyowani. Chero zvodii tinogara tichiti eIzvo zvakakosha kuve ne beta shanduro dzino tarisa pakuvandudza iyo inoshanda sisitimu uye gadzirisa chero diki tupukanana twunoonekwa.
Iye zvino idzi shanduro dzeveruzhinji dzichiri kusvika, izvo zvandakambotaura kuti hazvizotora nguva yakareba nekuti zvinowanzo buda mumaawa mashoma ekutanga mavhezheni evanogadzira. Muchidimbu, yechishanu beta vhezheni yeaya OS yeApple TV uye yeApple Watch, mangwana iyo beta vhezheni inotarisirwa kuvhurwa kune vanogadzira macOS Mojave.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Beta 5 yewatchOS 5.1 uye tvOS 12.1 vagadziri
Mufananidzo weGoogle Chrome muMufananidzo chinhu chave kuwanikwa natively
Yekutanga 13-inch MacBook Pro 2018 inoonekwa muchikamu chakadzoreredzwa chenyika yedu